Global Voices teny Malagasy · 8 Marsa 2009
08 Marsa 2009
Mey 2021 33 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 08 Marsa 2009
Israely: Noraisina tamin-kafanampo ny rindrin’ny hatsiaka
Syria08 Marsa 2009
Noraisin’ireo mponina tamin-kafaliana aok’izany ny rotsa-panala sy ny ranomandry izay nampangatsiatsiaka an’Israely tamin’ity herinandro ity. Kely sisa dia ho tapitra ny vanim-potoanan’ny orana, maro ireo matahotra fa ho tafiditra ao anatin’ny haitany mahatsiravina noho ny ny rotsak’orana kely dia kelin’ity taona ity ny vanim-potoanan’ny fararano.
Meksika: Notsongaina handray anjara amin’ny mozika Orkestra YouTube ny mpitendry anankiroa.
Amerika Latina08 Marsa 2009
Notsongaina hilalao ao amin'ny Mozika Orkestra Iraisam-pirenena ireo mitendry Meksikana roa, tetika fiaraha-miasa ampiasaina ny gazety ara-tsosialy amin’ny alalan’ny haino an-tsofinan’ny horonantsary YouTube. Samy nampiditra horonantsary mampiseho ny talentany eo amin'ny mozika i Manuel Zogbi avy amin'ny saltillo sy ny mpikirakiran'ny YouTube Intisamente ao veracruz mba hiavaka ao anatin'ny fifaninana.
Miray hina ny mpamaham-bolongana Ejipsiana miatrika ny fampihorohoroana
Ejipta08 Marsa 2009
Nanoratra I Eman AbdElRahman hoe ahoana re ny fihetsika asehon’ny tontolon’ny famahanam-bolongana Ejipsiana manoloana ny daroka baomba tao Al Hussein tamin’ny 22 Febroary izay nahafaty mpizaha tany Frantsay ary nandratrana olona mihoatra ny 20 isa. Te hiresaka ho androany mikasika ny vondron’ny mpamaham-bolongana Ejipsiana sy ny fanapaha-kevitr’izy ireo hiady manohitra...
Eropa: Fitsidihan'i Obama atsy ho atsy sy ireo fanamarihana momba izany
Amerika Avaratra08 Marsa 2009
Manomana fitsidihana any Grande-Bretagne, Frantsa, Alemana ary ny Repoblika Czech ny Filohan'i Etazonia Barack Obama amin'ny volana ho avy io, mandritry ny fivoahany voalohany mitsidika an'i Eropa taorian'ny nahalàny azy. Anatin'ny hafany mitondra ny lohateny hoe “Te-hihaona aminy daholo izy mianakavy.” dia izao no nosoratan'i P O Neill ao amin'ny...